लगानी गर्ने होइन ? महिला लघुवित्तको आइपिओ माघ २८ गतेबाट बजारमा आउँदै - Arthasansar
लगानी गर्ने होइन ? महिला लघुवित्तको आइपिओ माघ २८ गतेबाट बजारमा आउँदै
सोमबार, १९ माघ २०७७, ०७ : ५७ मा प्रकाशित
महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण सेयर (आइपिओ) निष्काशन गर्ने भएको छ ।
संस्थाले ४ लाख कित्ता साधारण सेयर (आइपिओ) माघ २८ गतेबाट मात्र निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको हो ।
संस्थालेजारी पूँजीको ४० प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड बराबरको प्रति सेयर एक सय रुपैयाँ दरका ४ लाख कित्ता साधरण सेयर (आइपिओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो । जसमध्ये जारी पूँजीको ०.५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुको लागि, ५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार कित्ता सेयर नागरिक लगानी कोषका लागि र बाँकि कित्ता ३ लाख ७५ हजार कित्ता साधरण सेयर सर्वसाधारणहरुको लागि सार्वजनिक निष्काशन गर्नेछ ।
लगानीकर्ताले न्युनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले उक्त आइपिओमा माघ २८ गते गतेदेखि र छिटोमा फागुन २ गते र ढिलोमा फागुन १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीकाे उक्त साधारण शेयर सार्वजनिक गर्न निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले गर्नेछ ।
इन्क्रा रेटीङ् नेपालले उक्त आइपिओलाई इन्क्रा एनपी डबल बि रेटीङ् प्रदान गरेको छ यसले वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सन्दर्भमा मध्ये जोखिम रहेको देखाउँछ ।
आइपिओ र कम्पनीको बारेमा थप् जानकारीको लागि तलको विवरण हेर्नुहोस् :